"दुष्टको पदचिन्ह" उपन्यास जहाँ हत्यारा पत्ता लगाइन्छ एक आईफोन एक्स धन्यवाद आईफोन समाचार
"दुष्टको पदचिन्ह", उपन्यास जहाँ हत्यारा पत्ता लगाइन्छ एक आईफोन एक्स धन्यवाद।
टोनी कोर्टेस | | आईफोन एक्स, धेरै
एप्पल ब्रह्माण्ड वरिपरि घुम्ने टेक्नोलोजी ब्लगमा षड्यन्त्र र हत्याका उपन्यासहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु सामान्य कुरा होइन। हामी सँधै समीक्षा गर्दैछौं, एप्पल उपकरणहरू, अनुप्रयोगहरू, अद्यावधिकहरू, स्क्रिन रिजोलुसनहरू र एक हजार प्राविधिक डेटाको बारेमा हालको समाचारहरूमा कमेन्ट गर्दै।
हिजो मैले उपन्यास पढ्न सकें «दुष्टको छापThe म्याड्रिड लेखकबाट मानुएल रियोस सान मार्टिन। म व्याख्या गर्न कोशिस गर्नेछु कुनै बिग्रेको छैन किन म तपाईंलाई यो पढ्न आमन्त्रित गर्दछ।
जनवरी २०१ 2017 मा, मैन्युएल रिओस आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित, "सर्कल"। एक पुलिस थ्रिलर जहाँ एक टिभी प्रतिस्पर्धीको मृत्यु हुन्छ क्यामेराको अगाडि प्रत्यक्ष। सामाजिक नेटवर्कहरूले ठूलो भूमिका लिन्छ, किनकि पाठकले सामाजिक नेटवर्कहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ र उपन्यासको कथानक अनुसरण गर्न अनलाइन सूचना पहुँच गर्न सक्दछ।
यो गत जुन, आफ्नो दोस्रो पुस्तक प्रकाशित गर्दछ, "खराबीको छाप।" अर्को जासूसी कथा जुन केटाहरूले उत्खननमा एक युवतीको लास भेट्टाउँदा सुरु हुन्छ एटापुर्काहजारौं बर्ष पहिले बनाइएको चिहानको नक्कल गर्ने नेरडेन्टल चिहानमा। तीन अन्वेषकहरूले मुद्दा लिन्छन्, किनकि यो धेरै मिल्दोजुल्दो छ किनकि उनीहरूले six बर्षमा समाधान नगरी छोडेका थिए।
अहिले सम्म, सयौं जस्ता एउटा अपराध उपन्यास जुन पुस्तक पसलहरू र पुस्तकालयहरू मार्फत चल्छ, र पछि, ebooks बेच्ने समर्पित पोर्टलहरूको माध्यमबाट। म यस पुस्तकमा टिप्पणी गर्दछु किनकि एप्पल उपकरणहरूमा ती "हुक" को लागी यसको कृपा छ। पूरा उपन्याससँग स्पष्ट सन्दर्भहरू छन्, केहि प्राविधिक हुन् आईफोन र आईओएस संग यसको कार्यहरू। उनीहरूले पीडितको सेल फोन एक दिन गाडे पछि भेट्टाउँछन्, र जब तिनीहरूले देख्छन् कि यो एकदम नयाँ थियो आईफोन एक्स, पुलिसले न्यायाधीशलाई फोन अनलक गर्न उसलाई खन्न लगाउन भन्यो .. ¡फेस आईडी मार्फत!
तिनीहरू सफल हुन्छन् वा हुँदैनन् मँ खुलाउदिन। तपाईले प्रयोग गर्ने प्रणालीको बारेमा धेरै विस्तृत विवरणहरू छन् एप्पल अनुहार मान्यता को लागी। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि लेखकसँग उसको नसाबाट स्याउको रस छ। अन्त्यमा, तिनीहरूले पत्ता लगाउन कि हत्यारा कसलाई धन्यवाद हो अर्कोलाई आईफोन एक्स.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » "दुष्टको पदचिन्ह", उपन्यास जहाँ हत्यारा पत्ता लगाइन्छ एक आईफोन एक्स धन्यवाद।
सेप्टेम्बरमा ग्यालेक्सी फोल्डमा सामसुले फिक्स गरेको छ
व्हाट्सएप क्रस-प्लेटफर्म र क्लाउडमा छिट्टै हुनेछ